Eksodusi 26 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
Izindwangu zetende (1-14)
Izinhlaka zamapulangwe nezisekelo ezinezimbobo (15-30)
Ikhethini nesihenqo (31-37)
26 “Nizokwenza itabernakele + ngezindwangu eziyishumi zamatende zelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe, intambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli nendwangu ebomvu. Izindwangu kufanele nizenze zibe nomfanekiso wamakherubi + othungelwe kuzo. + 2 Indwangu yetende ngayinye izoba izingalo* ezingu-28 ubude nezingalo ezine ububanzi. Zonke izindwangu zetende kufanele zilingane. + 3 Izindwangu ezinhlanu zetende kufanele zixhunywe zilandelane, nezinye izindwangu ezinhlanu zetende kufanele zixhunywe zilandelane. 4 Nizokwenza izihibe ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka ekupheleni kwendwangu eyodwa yetende esekugcineni kwezindwangu ezilandelanayo, futhi kufanele nenze okufanayo nasekupheleni kwendwangu yokugcina ezindwangwini ezilandelanayo lapho zizohlangana khona. 5 Nizokwenza izihibe ezingu-50 endwangwini eyodwa yetende nezihibe ezingu-50 ekupheleni kwenye indwangu yetende ukuze ziqondane lapho zizohlangana khona. 6 Kufanele nenze amahhuku egolide angu-50 nihlanganise lezi zindwangu zetende ngawo, itabernakele lizoba yinto eyodwa. + 7 “Nizokwenza nezindwangu zoboya bembuzi + zetende elingaphezu kwetabernakele. Nizokwenza izindwangu zetende ezingu-11. + 8 Indwangu yetende ngayinye izoba izingalo ezingu-30 ubude nezingalo ezine ububanzi. Zonke lezi zindwangu zetende ezingu-11 kufanele zilingane. 9 Kufanele nihlanganise izindwangu zetende ezinhlanu ndawonye bese nihlanganisa ezinye izindwangu zetende eziyisithupha ndawonye, futhi kufanele nipheqe indwangu yetende yesithupha engaphambi kwetende. 10 Kufanele nenze izihibe ezingu-50 ekupheleni kwendwangu eyodwa yetende, okuyiyona esekugcineni ezindwangwini ezilandelanayo, nezihibe ezingu-50 ekupheleni kwendwangu yetende kwenye indawo ezihlangana kuyo. 11 Kufanele nenze amahhuku ethusi angu-50 nifake amahhuku ezihibeni nihlanganise itende, libe yinto eyodwa. 12 Ingxenye esalayo yezindwangu zetende izolenga. Uhhafu osalayo wendwangu yetende uzolenga ngemuva kwetabernakele. 13 Izindwangu zetende ezisalayo zizolenga etabernakele ngengalo eyodwa ohlangothini ngalunye ukuze zilimboze. 14 “Itende nizophinde nilenzele isembozo sezikhumba zezinqama ezidaywe zaba bomvu nesembozo sezikhumba zezimvu zamanzi ngaphezulu. + 15 “Nizokwenzela itabernakele izinhlaka zamapulangwe + ngokhuni lomtholo, zime. + 16 Uhlaka ngalunye lwepulangwe kufanele lube izingalo eziyishumi ukuphakama, nengalo nohhafu ububanzi. 17 Uhlaka ngalunye lwepulangwe lunamaqhuzu amabili.* Yileyo ndlela okufanele nenze ngayo zonke izinhlaka zamapulangwe zetabernakele. 18 Kufanele nenze izinhlaka zamapulangwe ezingu-20 zohlangothi oluseningizimu lwetabernakele. 19 “Nizokwenza izisekelo zesiliva ezingu-40 ezinezimbobo + ngaphansi kwezinhlaka zamapulangwe ezingu-20: izisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka olulodwa lwepulangwe okuzongena kuzo amaqhuzwana alo amabili, nezisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka lwepulangwe ngalunye olulandelayo okuzongena kuzo amaqhuzwana alo amabili. + 20 Olunye uhlangothi lwetabernakele, uhlangothi olusenyakatho, lwenzeleni izinhlaka zamapulangwe ezingu-20 21 nezisekelo zazo zesiliva ezingu-40 ezinezimbobo, izisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka olulodwa lwepulangwe nezisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka lwepulangwe ngalunye olulandelayo. 22 Ingxenye engemuva yetabernakele entshonalanga nizoyenzela izinhlaka zamapulangwe eziyisithupha. + 23 Nizokwenza izinhlaka zamapulangwe ezimbili ezizoba izigxobo ezimbili zasemakhoneni angemuva etabernakele. 24 Kufanele ziphindeke kabili kusukela phansi kuya phezulu kuze kufike esongweni lokuqala eliphezulu. Lokhu kufanele kwenziwe kuzo zombili futhi zizoba izigxobo ezimbili zasemakhoneni. 25 Kufanele kube nezinhlaka zamapulangwe ezingu-8 nezisekelo zazo zesiliva ezingu-16 ezinezimbobo, izisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka olulodwa lwepulangwe nezisekelo ezimbili ezinezimbobo ngaphansi kohlaka lwepulangwe ngalunye olulandelayo. 26 “Nizokwenza izingodo zokhuni lomtholo, ezinhlanu zezinhlaka zamapulangwe zohlangothi olulodwa lwetabernakele, + 27 nezingodo ezinhlanu zezinhlaka zamapulangwe zolunye uhlangothi lwetabernakele, nezingodo ezinhlanu zezinhlaka zamapulangwe zohlangothi lwetabernakele olusentshonalanga, lwengxenye engemuva. 28 Ugodo oluphakathi nendawo olunqamula maphakathi nezinhlaka zamapulangwe kufanele lusuke kolunye uhlangothi luye kolunye. 29 “Nizonameka izinhlaka zamapulangwe ngegolide, + nizokwenza amasongo azo egolide abe yizinto zokufaka izingodo, lezi zingodo kufanele nizinameke ngegolide. 30 Itabernakele kumelwe nilimise ngokomklamo walo enawuboniswa entabeni. + 31 “Kufanele nenze ikhethini + lentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe. Lizokwenziwa libe nomfanekiso wamakherubi othungelwe kulo. 32 Nizoligaxa ezinsikeni ezine zomtholo ezinanyekwe ngegolide. Amahhuku azo kufanele kube awegolide. Izinsika kufanele zibe phezu kwezisekelo zesiliva ezine ezinezimbobo. 33 Nizolengisa ikhethini ngaphansi kwamahhuku, ningenise umphongolo wobuFakazi + lapho ngaphakathi kwekhethini. Ikhethini lizonihlukanisela indawo eNgcwele + neNgcwelengcwele. + 34 Kumelwe nibeke isivalo phezu komphongolo wobuFakazi endaweni eNgcwelengcwele. 35 “Nizobeka itafula ngaphandle kwekhethini, uthi lwesibani + luqondane netafula ohlangothini lwetabernakele oluseningizimu; itafula lona nizolibeka ohlangothini olusenyakatho. 36 Nizokwenza ikhethini* lomnyango wetende ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, indwangu ebomvu nelineni elisezingeni eliphezulu elisontiwe, kwelukwe kuhlanganiswe ndawonye. + 37 Nizokwenzela ikhethini* izinsika ezinhlanu zomtholo nizinameke ngegolide. Amahhuku azo kufanele kube awegolide futhi nizozibumbela izisekelo zethusi ezinhlanu ezinezimbobo.
^ Noma, “lunezindukwana ezimbili ezimile.”